ပျားဝတ်မှုန် / ပိုလန် တွေဟာ အန္တရာယ်ကင်းရဲ့လား? 🚨🚨 – Burmese Baby
ပျားဝတ်မှုန် / ပိုလန် တွေဟာ အန္တရာယ်ကင်းရဲ့လား? 🚨🚨
Web Master | October 13, 2017 | Articles, Health | Comments
အခုရက်ပိုင်းမှာ MLM ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ ပိုလန် ကြောင့် ကင်ဆာတို့ ဘာတို့ဖြစ်ပြီး ကလေးတစ်ယောက်ဆို သွေးကင်ဆာနဲ့ အသက်ဆုံးပါးသွားတယ်ဆိုပြီး သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်ဆရာ။ အဲ့ဒီလို ပိုလန်သောက်ပြီး ဓာတ်သဘာဝမတည့်မှုကြောင့် ကင်ဆာဆဲလ်ကို တမင်မွေးယူသလိုဖြစ်ပြီး အသက်ပါတဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်ပါသလားဆရာ။ ဆရာဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။ ပိုလန်တို့လင်ဇီးတို့က ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုရှိနိုင်ပါသလားဆရာ။ ပြီးတော့ MLM ကရောင်းနေတဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျန်းမာရေးရှုထောင့်အရ ပြည်သူတွေကို အကြံပြုလမ်းညွှန်စကားလေး ပြောပေးပါဦးဆရာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ (7 Day)
ပိုလန်ဟာ ဆေးဝါးမဟုတ်ပါ။ ရောဂါကိုကုသ ပျောက်ကင်းစေနိုင်သော အာနိသင်ရှိသည်ဟု သက်သေမပြနိုင်ပါ။ ဖြည့်စွက်စာအနေဖြင့်သာ လက်ခံထားပါသည်။ ပိုလန် (ပျားဝတ်မှုန်) ကို အမှုန့်အနေဖြင့်သော်လည်းကောင်း ၊ အတောင့်ပုံစံဖြင့်သော်လည်းကောင်း ရောင်းဝယ်ကြပါသည်။ ဖြည့်စွက်စာ ဆိုသည့်သဘောမှာ နေ့စဉ်သောက်သုံးနေရသည့်အရာမျိုးမဟုတ်ဘဲ သဘာဝအစားအစာ၏ အဖြည့်ခံအနေဖြင့်သာ သောက်သုံးရမည့် အမျိုးအစားများ ဖြစ်ပါသည်။ အားဆေးလည်း မဟုတ်ပါ။
MLM ဟုခေါ်သော ကုမ္ပဏီများမှ ရောင်းချသော ပစ္စည်းများသည် ဆေးဝါးများ မဟုတ်ကြပါ။ ထိုသို့ ဆေးဝါးမဟုတ်သည်ကို ဆေးဝါးဟုတ်သယောင် ရောဂါပျောက်ကင်းသယောင် ပြောဆို၍ ရောင်းချခြင်းသည် ဟန်ဆောင်လိမ်လည်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ပိုလန်ကြောင့် အရွယ်ရောက်ပြီး လူကြီးများတွင် ကျောက်ကပ်ပျက်စီးစေတတ်ကြောင်း အထောက်အထားများကို အမေရိကန် ဆေးသုတေသနအဖွဲ့မှ ဖော်ပြထားပါသည်။ (ပုံပါတွဲလျက် ဖော်ပြထားပါသည်။)
ကလေးများမှာ လူကြီးများကဲ့သို့မဟုတ်ပါ။ အလွန်နုနယ်ပါသည်။ Facebook တွင် ကျွန်မကလေးကိုတိုက်နေတာ ဥာဏ်ကောင်းတယ် ကျန်းမာတယ်ဟူသော အထောက်အထားမရှိသည့် စကားများကို ယုံစားရန်မသင့်ပါ။ အပြင်တွင် တကယ်မကျွေးဘဲ Facebook ပေါ်တွင် အလကားလျှောက်ရေးနေသည့်လူများ အများကြီးရှိနိုင်ပါသည်။ သတိကြီးစွာ ထားသင့်ပါသည်။
တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်လျှင် မိမိတို့၏ ကလေးများနှင့် မိမိတို့ကိုယ်တိုင်သာ ရောဂါဝေဒနာများခံစားရ၍ စိတ်ဆင်းရဲပင်ပန်းကာ ဒုက္ခရောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဈေးရောင်းသူများကတော့ ငွေရသဖြင့် ပြုံးပျော်နေမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
Credit – Dr.KYAW THET SOE
ကိုယ့်ကလေးက အရပ်ရှည်မှာလား၊ ပုမှာလား?
ကလေးထိန်း မယ်ဆိုရင် သံချောင်းနဲ့ တူ ဆောင်ထားပါ
Comments | Jan 19, 2017
ကလေးများအတွက် သရေစာ ပီဇာမုန့်လုပ်နည်း
Comments | Jan 8, 2017
ကလေးတွေရဲ့အတွေးအမြင် စိတ်ကူး စိတ်သန်း
Comments | Dec 27, 2017